HGH ထိုင်းဆေးဆိုင် HGH ထုတ်ကုန်များအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးပါသည်
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက နိုဝင်ဘာလ 13, 2017
HGH ထိုင်းဆေးဆိုင်အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးပါသည် Genotropin ထိုင်းနိုင်ငံအပေါငျးတို့သဒေသများသို့နှင့်အခြား HGH ထုတ်ကုန်
ဘန်ကောက်မြို့ Courier ပေးပို့ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးဆိုင်9ကနေအမိန့်ကြာ: 00 နံနက် - 8: 00 ညနေ, အမိန့်3မတိုင်မီလက်ခံရရှိ: 00 ညနေတူကိုအပ်ပါလိမ့်မည် နေ့ဖြစ်၏။
အမိန့်3ပြီးနောက်လက်ခံရရှိ: ညဦးယံ၌ 00 ညနေယင်းလုပ်ငန်းများ၌ပါလိမ့်မည် လာမယ့်နေ့,9ကနေအားလုံးပေးပို့ခြင်း: 00 မှ3နံနက်: 00 ညနေ။
အတွင်းဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ငွေသားပေးချေမှုဖော်ပြ ဘန်ကောက်။ ကျနော်တို့ကြီးထွားပေးပို့ခြင်းနေ Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင်မှတဆင့်ဟော်မုန်းရန် ချင်းမိုင်, ဖူးခက်.
မေးလ်ဖော်ပြ ပတ္တရား, ဟွာဟင်း, ဥဒေါင်ထ, Koh သည် Samui, Koh သည် Chang, Suratkhani အပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားမြို့များနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ပြည်နယ်များ။
သငျသညျတောင်းမှတဆင့်ကြှနျုပျတို့၏ website တခုတခုအပေါ်မှာအမိန့်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ဒါမှမဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအတိုင်ပင်ခံတဆင့် အမိန့်များလိပ်စာနှင့်အချိန်ကိုအတည်ပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သားထားရန်စတင် ပြင်ဆင်မှုအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းများ၏ထုပ်ပိုး။
"E-mail ကို, သင်ဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုချန်ထားပေးပါ, ဖုန်း
နံပါတ်သို့မဟုတ် Whatsapp, လိုင်း, Viber ကို (ထိုင်းအရေအတွက်မရှိခြင်း၏အမှု၌) "။
ကျနော်တို့ရန်, ရေခဲနှင့်အတူတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုကွန်တိန်နာအတွင်း Genotropin ထားမည် ကြီးထွားဟော်မုန်း 2-8 ၏သိုလှောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ဒီဂရီ။
အဆိုပါကိရိယာအစုံ (တာဝန်ခံအခမဲ့) တို့ပါဝင်သည်:
တစ်ဦးချင်းစီကလောင်များအတွက် bd က Ultra Fine ကလောင်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် (40 အပိုင်းပိုင်း)
အမိန့်ထုပ်ပိုးပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သား (သင့်အမိန့်ကိုအတည်ပြုရန်) ပေးပို့ခြင်းမပြုမီသင် 1-2 နာရီဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်
အဆိုပါဆက်သားသငျ့အိမျ, ဟိုတယ်, တိုက်ခန်းသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးရာအရပျ (ဥပမာလေဆိပ်နှင့်အခြားသူများ) အားအမိန့်အပ်မည်
အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင်သည်ကျနော်တို့ကိုလက်မခံ (ငွေသားအတွက်ဆက်သားပေးဆောင်ရပါမည် သာထိုင်းဘတ်ငွေ) ။
Genotropin ထုတ်ကုန်တင်ပို့ဖူးခက်နှင့်ချင်းမိုင်မှ 1-2 ရက်ပေါင်းကြာပါသည်။
ယနေ့အထိကျနော်တို့ချင်းမိုင်နှင့်ဖူးခက်မှအမြန်ချောပို့စေပါဘူး (ထိုအတိုင်ပင်ခံနှင့်အပိုဆောင်းဖြန့်ဝေ၏အသေးစိတျကိုပြောင်းလဲ ရွေးချယ်မှုများ) ။
ကြိုတင်ငွေဖြည့် Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် terminal ကိုသဖြင့်ဖူးခက်သို့မဟုတ်ချင်းမိုင်မြို့ရှိကြီးထွားဟော်မုန်း Get
ယင်းအပေါ်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ခြင်းတောင်းအားဖြင့်သင်တို့၏အမိန့်အားမရပြီးနောက် ဝက်ဘ်ဆိုက်, ဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်က
ကျွန်တော်တို့သည်ငွေပေးချေမှုများအတွက်သင်၏အတည်ပြုချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်အသေးစိတျကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ် ပေးပို့ရန်လိပ်စာ, ထို့နောက်ကျနော်တို့နောက်ထပ်အဘို့ဖုန်းကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ် အသေးစိတ်ကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်။9ထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သား: 00 နံနက် 8 မှ: 00 ညနေဆေးပညာအတွက်ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့လေဆိပ်ရန်သင့်အမိန့်ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ် ထိုင်းလေကြောင်းအာကာသကောင်းကင်၏ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ရေခဲနှင့်အတူကွန်တိန်နာ, ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကုန်တင်ကုန်ချ။ ကျနော်တို့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ, လက်ခံသူ၏အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသောအဖြစ်ဖောက်သည်သည်သူ၏အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်ရှိရာမြို့နှင့်လေဆိပ်ထုတ်ဖြည့်ပါ။ အားလုံးအမိန့်ကိုပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ပျံကစေလွှတ်နေကြသည်။
အမိန့်အလွန်လွယ်ကူစွာဖြစ်ပါတယ်စုဆောင်း, သင်ရုံလေဆိပ်ကိုသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် သင့်ရဲ့အမိန့်အရတစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်အိုင်ဒီကဒ်နှင့်အတူ Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် terminal ကို။ သင့်အနေဖြင့်ပေးပို့ပြတင်းပေါက် Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင်၏ဝန်ထမ်းမှတင်ပြသင့်တယ် သင့်ရဲ့အမိန့်အဘို့ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း။
ဟွာဟင်း, ပတ္တရားနှင့်အခြားမြို့ကြီးများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ Genotropin ပေးပို့
ထိုင်းနိုင်ငံ (1-3 ရက်)
ဟွာဟင်း, ပတ္တရားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏အခြားမြို့များနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှဖြန့်ဝေ EMS express ကိုထိုင်း post ကိုဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအတိုင်ပင်ခံမှတဆင့်အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, သို့မဟုတ် ခြင်းတောင်းအမိန့် (လိပ်စာအမည်နှင့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုင်းဘဏ်အကောင့်ပေးချေမှုများအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက် ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သားထုပ်ပိုးကြီးထွား process ပါလိမ့်မယ် ဖောက်သည်မှပေးပို့ခြင်းတို့အတွက်ဆေးဝါးကုသမှုထုပ်ပိုးအတွက်ဟော်မုန်း။ ပေးပို့ခြင်း9ကနေပေါ်ပေါက်: 00 မှ 8 နံနက်: EMS ကနေတဆင့် 00 ညနေထိုင်း post ကိုဖော်ပြ ဝန်ဆောင်မှု (ကပေးပို့ရန်လိပ်စာပေါ် မူတည်. 1-3 ရက်ပေါင်းကြာ)
မပို့ပြီးနောက်, ငါတို့သည်သင်အလို့ငှာများ၏ခြေရာခံအရေအတွက်ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ် တံခါးကိုရန်သင့်ပေးပို့ရန်လိပ်စာတံခါးနားမှာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဘဏ်ငွေလွှဲဘို့ငွေပေးချေ၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ထိုင်းကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, လွှဲပြောင်းအောင်အဘို့အသင်သာရန်လိုအပ်ပါတယ် အကောင့်နံပါတ်နှင့်ညှိနှိုင်းများ၏အကျိုးခံစားခွင့်ရဲ့ဘဏ်ကိုငါသိ၏။
လွှဲပြောင်း ATM စက်တွင်ငွေသား replenishment သုံးပြီးမည်သည့် ATM စက်များမှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် နှင့်လက်ခံရရှိသူရဲ့အကောင့်အရေအတွက်ကသတ်မှတ်ခြင်း။
ဟေ့။ ငါစခရင်ပုံကိုစေလွှတ်။ , သငျသညျရခဲ့သလား
Suzanentic နိုဝင်ဘာလ 06, 2018
SuzanWhicy နိုဝင်ဘာလ 02, 2018
ဇန်နဝါရီ သြဂုတ်လ 03, 2018
မိုက်ကယ် ဇူလိုင်လ 24, 2018